राई र सन्तराजले उपचार सहयोगको लागि गरे याचना - Limbuwan khabar
बिहिबार, १६ असार, २०७९
राई र सन्तराजले उपचार सहयोगको लागि गरे याचना
बिहिबार, ०९ असार, २०७९ बिहानको ०९:१४ बजे, लिम्बुवान न्युज
दमक, झापा । झापाको शिवसताक्षी ८ बसोबास गर्ने २८ वर्षीय विशाल राई र रेणु सन्तराजले उपचार सहयोगका लागि याचना गरेका छन् ।
बुधबार पत्रकार मञ्च दमकको सभाहलमा राईका तर्फबाट विशाल दुमी राई बचाउ अभियानले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उपचारको सहयोगका लागि याचना गरेको हो । साेही कार्यक्रममा रेणु सन्तराजकाे परिवारले पनि सहयाेगकाे याचना गरेका छन् । अभियानका संयोजक बलबहादुर राईका अनुसार विशालको पारिवारिक अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको र हालसम्म ४–५ लाख रकम उपचारका क्रममा खर्च भइसकेको छ ।
हाल सिभिल अस्पताल काठमाडौंमा उपचार गराइरहेका विशालको शरीरको रगत परिवर्तन गर्नुपर्ने चिकित्सकले सल्लाह दिएको र सो कार्यका लागि ३० देखि ३५ लाख खर्च हुने बताइएको छ ।
अभियानका तर्फबाट इच्छुक मनकारी दाताहरुसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जारी अपिलमा उल्लेख छ ।
सहयोगका लागि अभयिानले सेन्चुरी बैंक, दमक शाखामा बलबहादुर राई र धिरज राईको नाउँमा बैंक खाता खोलेको जानकारी दिइएको छ ।
सहयोग गर्न इच्छुक दाताहरुलाई सेन्चुरी बैंकको दमक शाखामा खता नम्बर 0570001530C5 मा सहयोग रकम जम्मा गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तैगरी सोही मञ्चको सभाहलबाट दमक ७ निवासी ५२ वर्षीया रेणु सन्तराजको परिवारले पनि उपचार सहयोगको याचनासहित दाताहरुसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
२ वर्षअघिदेखि दुवै मृगौला खराब भइ बिराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेकी सन्तराजको परिवारले सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।
बिगत ४० वर्षदेखि दमकमा ढुङ्गाको जातो, सिलौटालगायत घरायसी सामग्री कुँदेर जिविकोपार्जन गर्दै आएकी सन्तराजको उपचारका क्रममा जायजेथासमेत सकिएको उनका छोरा मुकेश सन्तराजले जानकारी दिए ।
उनलाई सहयोग गर्न इच्छुकले मुकेश सन्तराजको नाममा प्राइम कमर्सियल बैंक दमक शाखामा रहेको खाता नम्बर 03501810CA मा सहयोग रकम जम्मा गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
भीषण र छाेरी अभियन्ताकाे स्वरमा ‘ए छाेरी, ए बाबा’ सार्वजनिक
चर्चित गायक तथा संगीतकार भीषण मुकारुङ र उनकी छोरी अभियन्ता मुकारुङको स्वरमा ‘ए छोरी, ए बाबा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि गायनमा सक्रिय भीषणकी छोरी अभियन्ताले पहिलोपटक गीत रेकर्ड गराएकी...
माङसेबुङमा पत्रकारितामा फिचर लेखन तालिम सम्पन्न
दमक, १६ असार । इलामको माङसेबुङमा गत आइतबारदेखि जारी ‘पत्रकारितामा फिचर लेखन तालिम’ बुधबार सम्पन्न भएको छ । फोनिज संघीय समितिका उपाध्यक्ष कमन देवान र स्थानीय अग्रज सञ्चारकर्मी अवोध अविरलले सहजीकरण गरेको तालिममा आधारभूत समाचार...
माङसेबुङ गाउँपालिकाले कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउँदै
लिम्बुवानखबर, १५ असार । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को निति तथा कार्यक्रममा माङसेबुङ गाउँपालिकाका कृषकहरुका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको हो । निति तथा कार्यक्रममा कृषकलाई प्रोत्साहनका...
आज धान दिवसः देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै
फाइल तस्वीर लिम्बुवानखबर । आज १९औं राष्ट्रिय धान दिवस देश भर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यो बर्ष ‘धान रोपौं, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौं’ नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन लागिएको हो । यस दिवसको...
© 2022 Limbuwankhabar. All rights reserved. / Website By Codebundles